Chowking Orient Restaurant, Dubai အလုပ်ခေါ်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » Chowking Orient Restaurant, Dubai အလုပ်ခေါ်စာ
Chowking Orient Restaurant, Dubai အလုပ်ခေါ်စာ
Posted by manawphyulay on Jun 16, 2011 in Business & Economics, Jobs & Careers |5comments
Please be informed that the above company is looking to recruit the below categories for their ongoing projects, below
given are the details.
1) Waitress – DHs. 1100/- + accommodation, transportation, duty meals, tips and joining ticket.
2) Waiters – Dhs. 1100/- + accommodation, transportation, duty meals, tips and joining ticket.
Please make sure that the candidates are able to communicate in good English, must be presentable with a
good personality, must have atleast2years of experience.
Also please make sure that the candidates are having valid passport.
Kindly arrange to source and forward CV’s accordingly.
စိတ်ဝင်စားသူများ 379311 သို့ ဆက်သွယ်ပါရန်
ယခုလက်ရှိ ဒါဟန်းတန်ဖိုးကျနေပါတယ်။ ၁၁၀၀ ဆိုရင် မြန်မာငွေနဲ့ ၂ သိန်းတောင် ရအောင်မနည်းပို့ရပါ့မယ်။ Tips က မသေချာပါခင်ဗျာ။ UAE နိုင်ငံသားများမှာ ငွေကို အတော်စီစစ်သူများဖြစ်သောကြောင့် Tips ရရန်မသေချာသောကြောင့် တစ်လ ၁ သိန်းခွဲခန့်သာ ပြန်ပို့နိုင်ပါမည်။ သွားလိုသူများသွားနိုင်ကြပြီး ရောက်ပြီးလျင် ၂ နှစ်ပြည့်ပြီးမှ Resignation တင်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစားစေလိုကြပါသည်။
မနောရေ… ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း စောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ ရေးသားလိုက်ခြင်းပါ။ ဟိုရောက်မှ ဒုက္ခရောက်ရင် ဘယ်သူ့ ဘယ်သူကမှ ကူညီခြင်းမရှိပါ။ လစာ ၁၁၀၀ ကတော့ မြန်မာပြည်မှာပဲ လုပ်တာ ပိုတောင် သက်သာအဆင်ပြေပါ့မယ်။ နည်းနည်းလေးပိုရပြီး ဟိုမှာခံစားရတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဉ်းဆဲမှုတွေနဲ့ဆိုရင် မတန်ကြောင်း….
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ရတဲ့သတင်းလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ သွားချင်တဲ့သူများအတွက် စဉ်းစားနိုင်အောင် ခုလို ပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေ သိတဲ့သူတွေက ပြောပြပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
ဗျို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တို့ … သတိထားကြပါ ။ လူမှောင်ခိုကူးမှူတွေ အရမ်းခေတ်စားနေတယ်.. ။
ဒါကတော့ လူတိုင်းက စဉ်းစားဥာဏ်နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ ဦးနှောက်မရှိတဲ့သူတွေမှ မဟုတ်တာ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လားကို သိကြမှာပေါ့ etone လေးရဲ့…
ဒါတော့ ဟုတ်တာပေ့ါ မမမနောရဲ့ … ဒါပေမဲ့လည်း လည်လွန်းတဲ့ဘီး ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်လေ… ။ စဉ်းစား ဥာဏ်နဲ့ တွက်တတ်တော့ ငွေကြေးဆိုတာပိုလိုချင်လာတယ်…နည်းနည်းတုံးတဲ့လူထက် စိတ်ဆန္ဒပိုပြင်းပြလာတယ်… အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရောင်းစားခံရတာပါပဲ … ။ တလောကတောင် ဖတ်မိလိုက်သေးတယ်… မြန်မာ လူမျိုး ငါးဆယ်ကျော်ကို ပြန်ကယ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေ… ။